SALAMO 55 F.2 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 55 F.2
TSY AVELANY HANGOZOHOZO MANDRAKIZAY NY MARINA
Mihainoa ny fivavako Andriamanitra ô! Raha misy koa zava-manahirana ny saina ary mety mahavaky fo sy tena tsy mampilamina ny fiainana dia ny famadihan’ny sakaiza izay nitokiana no iray amin’ireny. Izany no nanjo an’i Davida eto. Vokatr’izany dia maniry handositra ka hiala lavitra ny toerana misy azy izy: “Eny, handositra lavitra aho ka hitoetra any an’efitra” (7) dia hitokana any izay heverina fa hisy filaminana. Te hanidina mba ho haingana ny fialana(6).Saingy hita fa tsy ho tanteraka mihitsy izany faniriana izany.
Miantoraka amin’Andriamanitra: Ny hany vahaolana eo anatrehan’ny fahasarotana dia ny fiantorahana amin’Andriamanitra ary izany indrindra no ataon’i Davida eto ka hilazany hoe:”Raha izaho dia Andriamanitra no hantsoiko ary Jehovah no hamonjy ahy”(16) ary hatrany am-panombohany ny vavaka dia hoy izy hoe: “Mihainoa ny fivavako Andriamanitra ô!” dia tohizany amin’ny hoe: “Aringano izy” (9) sy ny hoe : “aoka hanampoka azy ny fahafatesana” (15). Tena mafy ny nanjo azy! Fa any amin’ny faran’ny Salamo i Davida dia sady mampahery tena no mampahery ny hafa izay mety hitrangan-javatra mafy tahaka izay manjo azy ka milaza hoe: “Apetraho amin’i Jehovah ny entanao ary Izy no hanohana anao. Tsy avelany hangozohozo mandrakizay ny marina”(22).
Fampaherezana: Izay efa miaraka amin’Andriamanitra tsy avelany ho lasan’ny fahavalo na oviana na oviana intsony. Hoy Jesoa Kristy milaza izany:“ Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tànako” (Jaona 10.27-28).
FAMPIDIRANA NY BOKIN’ I EZRA
Ny bokin’i Ezra sy Nehemia izay iray tarika amin’ny bokin’ny Tantara I sy II hita ao amin’ny Testamenta Taloha, dia mampiseho amintsika ny tantaran’ny vahoakan’ Andriamanitra nanomboka tamin’ny fiandohany ka hatramin’ny fahababoany tany Babilôna, ary notantarain’ny teolojiana sy mpampianatra Soratra Masina tamin’izany fotoana izany.
Manomboka amin’ny baiko nomen’ny Mpanjakan’i Persa Kirosy ny bokin’i Ezra, baiko nanome alalana ny Jiosy handeha hiverina any Jerosalema hanangana ny Tempoly (toko 1). Marobe ireo babo tany Babilôna niverina indray nihazo an’i Jerosalema (toko 2). Ny zavatra voalohany nataon’izy ireo dia “nanomboka ny raharaham-pivavahana indray, sy nanorina ny Tempoly” (toko 3).
Nahatonga fanoherana avy amin’ny fahavalo anefa ny fanamboarana ny Tempoly, ka voatery nifandray tamin’ ny fitondram-panjakana Persiana izay nanamafy ny fahazoan-dalana nomena ny Jiosy hanorina ny Tempoly rava (toko 4-6).
Ny tapany faharoan’ ny boky dia mitantara ny nanirahan’i Artaksersery, mpanjakan’i Persia an’i Ezra Mpisorona handeha hampifoha sy hanavao ny fiainam-panahin’ny Jiosy tany Jerosalema (toko 7-10).
Ny votoatin’ny bokin’i Ezra dia manindry mafy ny tokony hananana fiainam-panahy sy finoana mafy orina sy voadio. Mampiseho ny fahasahiana sy herim-po nananan’ity mpisorona ity tamin’ny fanavaozana nentiny hamelomana indray ny fanompoam-pivavahana amin’Andriamanitra teo amin’i Israely, izay firenena nofidin’Andriamanitra hahaterahan’i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy.